platform Mahhala ngokudala amawebhusayithi - kuba ithuba lokuthuthukisa isisetshenziswa yabo (ku-intanethi, ibhizinesi khadi, njll ...) Ngaphandle amakhono ekhethekile web izinhlelo, ngaphandle kokuchitha lutho. Ngosizo intanethi awukwazi kuphela ukwakha website, kodwa futhi ukuhlobisa it in umklamo olumnandi silingane isikhunta, nigcwalise amamojuli, futhi umbhalo, ngisho self-ulungise uma kudingeka.
Yiqiniso, abaklami sites, nakuba lula ukuthuthukiswa web, kakhulu eliphansi kuya izinga umsebenzi ochwepheshe. Ngakolunye uhlangothi, i-platform khulula ngokudala iwebhusayithi yakho kunezinzuzo zako siqu:
kulula ukuyisebenzisa futhi akudingi amakhono akhethekile;
umklamo ingxenye ayixhumaniswanga umbhalo, ukuvumela ukuba ulungise ezinye umbhalo kanye isakhiwo;
Awudingi ukuchitha isikhathi on ukuthuthukisa kokwakhiwa, khetha isifanekiso uthanda ngokwanele;
abezindaba kulula ukulayisha;
izinguquko zishicilelwe ngokushesha, ngokushesha ngemuva kwesicelo;
Awudingi ukuba sikhathazeke ngokuthi ukugcina isipele yonke idatha esisogwini umakhi iseva;
Ezinye amapulatifomu avumele ukudluliselwa isayithi kwenye ukusingathwa;
iwebhusayithi ingashintshwa kalula zokusebenza zefoni.
Kulesi Ukubuyekeza uzothola ezisekelweni phezulu ukwakha website khulula ngesiRashiya, kanye izici zawo ukhiye (umthamo, lula nokunye. P.), Vumela ukuhlukanisa kubo kusukela ezihlukahlukene omkhulu amasevisi. Esikhathini simo ethulwa ngesikhathi nomthamo kungase kutholakale kuphela izinjini, kungase kutholakale phakathi nezigaba ezahlukene abasebenzisi.
Wix - mhlawumbe yesikhulumi engcono ukudala indawo mahhala, okuyinto esetshenziswa abasebenzisi ezingaphezu kwezigidi ezingu-55 emhlabeni wonke. Wix Inzuzo main kuyinto alula: interface enembile, kalula ukuhlela nokufundisa materials. Kuhle elula kufinyeleleke, futhi ngeke kudingeke yimuphi nolwazi olukhethekile mayelana nokubhala ikhodi iwebhusayithi. Enye inzuzo ukuthi inani elikhulu imisebenzi futhi amaningi (angaphezu kuka-500 izifanekiso) nokwakhiwa, kanye nekhono ukudala awabo.
Njengoba umkhuba walo amasayithi kulengxenyekazi kukhona creative, ngakho Wix ekahle abaculi yokudala, bezithombe, Blogger kanye encane izitolo inthanethi Onjiniyela ngezandla imikhiqizo noma izinto engavamile.
Enye ibhonasi ewusizo - kungenzeka ukufakwa amawijethi ongazisebenzisa iseluleko inthanethi, uhlelo impendulo noma okungaxhunyiwe ku-intanethi. Wix futhi benawo inkonzo ukusebenza for ukudluliselwa isayithi kuya version mobile ingashintshwa ukuze useshe injini ku-Google futhi Bing. Uhlangothi technical ngokuphelele emahlombe isikhungo support ikhasimende, ngakho ukuphazamiseka emsebenzini indawo ayenzeki.
Kulaba minuses Ngithanda ukusho ukuthi akunakwenzeka ukuhlela isifanekiso nekhodi html, ngakho web umklami professional, cishe, kuyodingeka ndawo ukuze ujike, kodwa Wabasaqalayo ngeke babe nezinkinga ukudalwa isayithi. Omunye ethile - inqwaba amasevisi eziphathelene nezimali, nokungakwazi ukuvala izikhangiso in the version free.
Ngokuvamile, ngezindleko eziphansi, futhi ukungabi ephelele yolwazi lobuchwepheshe, uma kukhethwa nesigcawu ukudala amawebhusayithi mahhala kuwufanele ukunaka Wix.
I ngowesibili ohlwini, kodwa hhayi okungenani, platform UCOZ - omunye omdala kuwebhu, uye kugujwa 2015 unyaka wayo yoke.
Umklami UCOZ - ngempela njengethuluzi elinamandla kakhulu ukuze kwakhiwe khulula intanethi. Inama ukusebenza ocebile, ikuvumela ukuba wenze yiluphi uhlobo iwebhusayithi: ibhizinesi khadi, Landing Ikhasi, nesitolo esiku-intanethi, amabhlogi, iforamu, nokuningi. Uma ukhetha dala, isibonelo, i sesitolo sangaphambili Inthanethi, ungaqiniseka ukuthi kukhona konke okudingeka usebenzele nalo.
Njengoba for izifanekiso, lapha ukukhetha akuyona olubanzi kangaka njengokungathi bazithoba Wix, kodwa isamba elincane $ 20-40 ungathola umklamo ngokwezifiso okuvela konjiniyela, abangafuni ncamashi ukukuhlangabeza ku-intanethi.
Ohlangothini plus sasibeka eqinile SEO-module kwenza kube lula ukuba ukukhuthaza indawo phakathi kwababusi phezulu semibuzo yakho yosesho.
Kulaba minuses. platform Mahhala ngokudala kumawebhusayithi ngaphandle ukukhangisa thukela akusho, UCOZ yayiphumula, ngakho banner angasuswa kuphela ngemva kokuba inkokhelo premium. Ukukhuluma yokukhokha yamanani UCOZ zitholakala kalula futhi musa abiza penny kuhle, futhi phakathi nezinsuku 2 emva ukubhaliswa isebenza 50% isaphulelo. Plus akhawunti premium, ungaxhuma ezingeni domain lesibili.
Njengoba isiphetho, ngeke ukuthole yikuphi ngakho ekahle isilinganiso "intengo - izinga" Nokho, osanda kufika kuyoba nzima ukubhekana isayithi kusuka ekuqaleni, kuba lula kakhulu futhi mnandi lapha web umklami abanolwazi.
Wayefana angaphandle Wix platform - isevisi A5 - kungabuye chasiselwe platform phezulu ukwakha website mahhala. It ikuvumela ukuthuthukisa iwebhusayithi HTML kanye flash, has a design ilungele ukuvunwa nokucubungula ikuvumela ukudala ngelakho, ilula ukusebenzisa futhi enembile, efanelekayo Wabasaqalayo, ikakhulukazi inkonzo lapho ungathola video tutorials.
I negative kuphela - .. nemikhawuko of the version free, okungukuthi, emsebenzini okwengeziwe kuyodingeka ukuthenga akhawunti premium.
Enye Analogue yasekhaya Wix ngemisebenzi emihle ngokudala ezitolo inthanethi - Setur. Ngokuvamile, platform khulula ngokudala amawebhusayithi zihlanganisa jikelele design izifanekiso Setur uzothola izikhala eziningi, ihlukaniswe ukuze kube lula ngezigaba: "Imfundo", "Business", njll Futhi ungakwazi oda ukuthuthukiswa design esiqokiwe ...
Kungani kungcono kakhulu ukwakha sesitolo sangaphambili kungxenyekazi Setur? Okokuqala, indima enkulu le sevisi okhokhela ukukhuthazwa yokusesha seo, lapho indawo uthola kuya phezulu yosesho, ngakho engcono wavakashelwa labo abangase babe abathengi. Okwesibili, noma iyiphi idatha kwi site, amabhlogo, ulwazi umkhiqizo, futhi inkambiso amafonti kushintshwe kalula. Okwesithathu, okuyinto ebaluleke kakhulu i-intanethi, Setur ihlinzeka kulula ukukhumbula igama lesizinda mahhala, wayithola kuphela nakutlhogeka ezingaphezu kuka 5 emakhasini isayithi.
Phakathi amaphutha - zonke izivimbelo efanayo ku-akhawunti mahhala, banner ukukhangisa, kubangele kuphela premium futhi ukusebenza ubuncane ekuthuthukiseni, ezifana amakhadi ibhizinisi noma Landing.
Nethouse umakhi ezingeni nedotyagivaet ukuze izimbangi zayo, kodwa, ngokungafani kuya ezisekelweni ephezulu, evumela ukusebenzisa indawo mahhala. In the version khulula uthola nje kancane yokukhangisa kanye ukugwenywa isibalo izithombe ukulayishwa.
Umklami has a amaphethini kahle elula design uma kuqhathaniswa ne Wix noma Ucoz, neze efanelekayo iwebhusayithi ezincane, lapho ebaluleke kakhulu izinga futhi okwakhe somklamo. Kunalokho, Nethouse platform efanelekayo ngokudala esitolo online ngoba kukhona kwesitolo inthanethi nge inqola yokuthenga isifanekiso, izinga seo-ukukhuthazwa, izinkokhelo inthanethi, ukuhlanganiswa namanye amasevisi nokunye. D.
Kulaba minuses - akukho ukuhlanganiswa 1c, akwenzeki ngaso sonke isikhathi ukuba uqinisekise isayithi lakho kwezinye izinsiza, lutho zingaguqulwa ikhodi HTML, ngakho abasebenzisi abanolwazi ngeke asondele esinye isigungu khulula ngokudala amawebhusayithi.
Ukuphela komuntu okungenhla Imali Ipulatifomu ukwakha website, kodwa akwenzekanga ngephutha ezibalwe lapha. Lena yisevisi abaklami professional ukudala izinga eliyingqayizivele futhi eliphezulu kakhulu futhi emsebenzini, futhi ukubhaliswa Landing, ukuyothenga, kanye namakhadi ibhizinisi. Futhi izinzuzo - ukusebenza okukhulu, sebuningini amamojuli, amawijethi nezilungiselelo. Kwaphela cishe u- $ 25 ngenyanga uthola i ezibizayo, esiyingqayizivele, iwebhusayithi stylish at injini ezinhle.
Fo.ru inkonzo has a esibonakalayo elula, enembile Wabasaqalayo ukusebenza amasayithi, futhi ezihlukahlukene amaphethini ezithakazelisayo, okungase ukushintshwa edala. Le nguqulo free akuyona banner izikhangiso awayiphazamisi, okuyinto esebenzisa kabi omunye platform khulula ngokudala amawebhusayithi.
Phakathi amaphutha - ezingeni eliphansi technical support, ukunqunywa amaphakheji pay, ezingeni eliphansi izici kubasebenzisi ethuthukile.
fo.ru sekukonke - isevisi kulabo abafuna ukuphila okulula, okusheshayo futhi khulula ngaphandle injini enamandla kanye sina seo-ukukhuthazwa noma labo nje ukufunda ukudala amawebhusayithi.
Umakhi ochwepheshe abadinga ukwakha indawo for 5-10 imizuzu. It is ngokuyinhloko okuhloswe ngaso ukudalwa izitolo, njengoba kufakazelwa ukusebenza walo ocebile, usekelo Hudula Ulahle, injini siqu futhi omkhulu seo nokwenza. Wabasaqalayo, mhlawumbe, kuyoba nzima ukuzisingatha. Kulaba nemiphumela ethile engathandeki - amanani entengo aphezulu ukuhlengwa nokudluliselwa isayithi kwenye domain.
Kuyiphi ipulatifomu ukukhetha?
Platform ukwakha inqwaba indawo futhi akekho kubo akuyona ngaphandle nemiphumela ethile engathandeki. Ukuze ukhethe ke eduze kwakho, mhlawumbe, ukuzama ezimbalwa ongakhetha kuzo. Enamandla kunazo kukhona elibanzi Wix futhi Ucoz. Ijubane isinyathelo, izinga nokusebenza bona bathethelele ngisho kwemali esetshenziswe akhokhelwayo. Njengoba for ezinye amapulatifomu, isibonelo, Nethouse, A5, Setur, kufanele kusetshenziswe kuphela version khulula, ngenye indlela, imali efanayo kungaba ngcono ukuthenga ukusingathwa ehlukile futhi asebenzise yesikhulumi khulula ngokudala Joomla futhi Wordpress amasayithi.
Ipulatifomu ngokudala amawebhusayithi khulula - yindlela enhle ukuthola ukuphila kwakho siqu, imali yakho kanye nesikhathi. Nokho, kufanele uqonde ukuthi igama lewebhusayithi kabani lesizinda liveza iqiniso ukuthi yakhululwa, bukeka ezingahloniphekile izindawo ezinkulu commercial, lapho kufanele kube ngokwanele ukuba imali ukuthuthukiswa ngabanye iphrojekthi Inthanethi. Lolu khetho kungenzeka ukuqala suit ibhizinisi uma ufuna ukusho ngawe, kodwa awukabi nayo imali eyanele imisebenzi marketing.
Khetha ezisekelweni abonakala elula futhi kuyaqondakala ngawe, musa ukuxhumana labo izici namakhono ukuthi awuhambi ukuyisebenzisa. Okuningi akusho kangcono.
Ukwakha website, indlela ukwakha website?
"Clomid": yokusetshenziswa zomuthi
Russian isakhiwo Federative
India, "Kudankulam" (NPP): incazelo, umlando kanye nezici
Yokupaka phambi kuwelwa: bangaki amamitha?